KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 23/12/2012
တကယ်ဖြစ်ရပ်လေးပါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ယောကျားင်္လေးတဦးတယောက်တအုပ်စုကညီမချင်း မစာနာသောကြောင့်မိမိရဲ့တနာကို ရယူမူအတွက်စိတ်ရောဂါရှင်တောင်အလွတ်မပေးသောသူမရှက်ဘူးလား မိမိအမည်ကိုတောင်မပြောနိုင်တဲ့ စိတ်ရောဂါရှင်ကလေးလေးမွေးဖွား
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:23 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:48 PM No comments:
တောင်ကိုရိးယားနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို
ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၇၅၂ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို မြန်မာအသင်းခန်းမ၊ဖူချွန်းမြို.တော်တွင် ၆ ရက် ၁ လပိုင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်
(တနင်္ဂနွေနေ.)နေ.လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအချိန်အထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်
ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ကျတော်များ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူး
ပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ စီစဉ်ထားသော ကောက်ညုင်းပေါင်းနှင့်အာဗြဲခြောက်၊ ကရင်သက္ကရာဇ်၂၇၅၂ခုနှစ် နှစ်သစ်တွင်ကံကောင်းခြင်းများလက်ဆောင်အဖြစ်
ကံစမ်းမဲများဖောက်ပေးခြင်း၊ တေးဂီတများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းတို.နှင့်အတူ
တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များအား ငါးသားလောက်ပေါင်း၊ ၀က်သားချိုချက်၊ကရင်လူမျိုးတို.၏ရိုးရာတာလပေါဟင်းတို.ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံမည်ဖြစ် ပါသောကြောင့် ပျော်ရွင်စွာ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို.ကြွရောက်အားပေးကြပါ
ဧည့်လမ်းညွှန်။ ။ ရထားဖြင့်စီးလာပါက လိုင်းနံပတ် ၁ မှစီးပြီး 부천역 ဖူချွန်းဘူဒါတွင်ဆင်း၍ တက္ကဆီဖြင့်စီးလာပါက လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းပြောပြီးစီးလာနိုင်ပါတယ်။
우 420 - 850 부천시 원미구 중2동 1093-1 근로자종합지관 3F
ဆက်သွယ်ရန်ဖုံး ။ ။ မန်းတင်ယဉ် - 010 2271 8333
စကက်နက်မိုး - 010 8714 7019
စောထွန်းလင်း- 010 7515 1317
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:24 AM No comments:
အစိုးရစစ်တပ် ၀ိုင်းရံထားသဖြင့် လိုင်ဇာဒေသခံများ ဗုံးခိုကျင်း တူးနေကြပြီ
ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေပေါ် ထားရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်ဟန်ဆောင် မဟာဗမာဝါဒီတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို ဒီလိုင်ဇာသိမ်းဖို့ အရေး တိုက်ပွဲတွေမှာ မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ ကြ ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကချင်အရေးဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအရေးပဲဆိုတာဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်။ ဒီလိုပြောတော့ တချို့ ကရင်တွေက မင်းရူးနေလားဆိုပြီး ကျနော့်ကိုပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ ကချင်ရဲ့နိုင်ငံရေးရပ်တည်မှုနှင့် သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှန်ကန်ပြီး တန်းတူမှုကိုအခြေခံပြီး ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူပေါ်လူဇော်လုပ်လိုတဲ့အမျိူးတွေ စနစ်တွေ အဏာရှင် သခင်ရူး ရူးနေတဲ့လူတွေကို ပြတ်ပြတ်ဆန့် ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ကျနော်တို့ ယနေ့ ကရင့်နိုင်ငံရေးနှင့် တော်လှန်ရေးကိုတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သံသယဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်စိတ်အားကြီးသူ လှပသောကျွန်များအဖြစ်တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ့မည့်သူများလာသည်ကို ကွန်ကရက်အပြီးမှာတွေ့ ရသောကြာင့်ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
လိုင်ဇာမြို့ဒေသခံ ကချင်အမျိုးသားတစ်ဦးက “တချို့အိမ်တွေကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့ကတည်းက ဗုံးခိုကျင်းတူးနေကြ တာ။ ဒီနေ့ လဂျားယန်မှာ ရဟတ်ယာဉ်က ဗုံးကြဲတော့ စက်သေနတ် မီးပွင့်တာတောင် မြင်ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ လိုင်ဇာနားလည်း စစ်တပ်တွေ ရောက်နေကြပြီဆိုတော့ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းက အိမ်ရှေ့ ဒါမှမဟုတ် အိမ်နောက်တွေမှာ ဗုံးခို ကျင်း တူးထားကြတယ်”ဟု ပြောသည်။
အစိုးရတပ်များက ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွင် ဓာတုလက်နက်ပစ္စည်းဟု ယူဆရသည့် မီးလောင်ဗုံးများ ပါဝင်ပြီး KIA ဘက်မှ ပြောဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့ပစ်ခတ်မှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ အနည်းငယ်ရှိကြောင်းနှင့် KIA ယာယီတဲအိမ်များ ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း လိုင်ဇာဒေသမှလာသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:20 AM No comments:
တပ်မတော်သားအချို့ ထိုးကြိတ်သဖြင့် ကလေး ၁ ဦး သေဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့နယ်အတွင်းမှာ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သားတချို့ရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်တာခံရတဲ့ ကလေး ၁ ဦးဟာ နှစ်ပတ်အကြာ ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ညပိုင်းက နတ်မော်ရွာသား ၁၆ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦးဟာ နယ်မြေခံ ခလရ (၁၈) က တပ်မတော်သား ၁ ဦးကို ဆိုင်ကယ်ဝင်တိုက်မိပြီးနောက် ထူပေးစဉ်မှာ တပ်မတော်သားတွေက ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဒဏ်ရာတွေကို မိဘတွေက ဟင်္သာတမြို့နဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဆေးရုံတွေထိ သွားရောက်ကုသပေမယ့်လည်း မသက်သာဘဲ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မောင်သန်းထိုက်အောင်ရဲ့ အခင်းဖြစ်မှု အခြေအနေကို မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်က “၁၄ ရက်နေ့ည တပ်ကွေ့နားလေးမှာ၊ ၈ နာရီခွဲလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဆိုင်ကယ်က ရဲဘော် ၁ ယောက်ကို ၀င်တိုက်မိတယ်တဲ့။ နောက် လဲသွားတဲ့သူကို ဆင်းထူတော့ ကလေးကို ၀ိုင်းဆွဲပြီး ကိုင်ပေးတဲ့သူက ကိုင်ပေး ထိုးတဲ့သူက ထိုးတယ်လို့ မြင်သူတွေက ပြောပြတယ်။ အခင်းဖြစ်ပြီး ကျမတို့ရောက်တော့ ကလေးအနား ကပ်ခွင့်၊ ကိုင်ခွင့်၊ ကြည့်ခွင့်မရပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီထိုးကြိတ်မှုဖြစ်စဉ်ကို မျက်မြင်မြင်တွေ့တဲ့ သက်သေ အမြောက်အမြားရှိပြီး လိုက်လံကူညီနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သားဖြစ်သူ မော်သန်းထိုက်အောင်ဟာ ထိုးကြိတ်ခံရပြီး ၃ ရက်လောက်ကစလို့ အိမ်မှာ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက် စတင်ဖြစ်လာပြီး ဟင်္သာတမြို့က ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံတွေမှာကုသခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မသက်သာတာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့က ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဆေးရုံကို တင်ပို့ကုသပေမယ့် ၂၇ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၃ နာရီမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်က ပြောပါတယ်။
သားငယ်ရဲ့ ဒဏ်ရာရရှိမှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်က “၁၄ ရက်နေ့က ထိုးခံရပြီးတော့ ၁၉ ရက်နေ့လောက်မှာ ကလေးက ထိုင်ရင် တည့်တည့်မတ်မတ်ထိုင်ချင်ရင် နောက်ကမှီထားမှ ထိုင်လို့ရတဲ့အနေအထား။ ဆေးရုံမှာ ဒီအမေနဲ့ ဒီသား ကုသမှုစခံယူကတည်းက သေပြီး အခု ပြန်လာတဲ့အထိကို သူနဲ့ကျမ မိနစ်လောက်ပဲ ခွာနေခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကျမအားလုံးကို ခံစားမိတယ်၊ သိလည်းသိတယ်။ ကလေးက ၀မ်းထဲကရှိတဲ့၊ အသက်အန္တရာယ်ကို အနီးစပ်ဆုံး ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ကလီစာတခု ပျက်ယွင်းပြီးမှ ဒီအခြေအနေ ဆိုက်ရောက်လာတယ်လို့ ဆရာမနဲ့ ဒေါက်တာတယောက် ပြောတာကို ရိပ်မိတယ်၊ သိလည်း သိတယ်။”
ဒီထိုးကြိတ်မှုအတွက် ဟင်္သာတရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခလရ ၁၈ တပ်ကတော့မောင်သန်းထိုက်အောင်အတွက် သတင်းမေးတာရှိပေမယ့် ဆေးဖိုးဝါးခတော့ မပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မောင်သန်းထိုက်အောင်ရဲ့ အလောင်းကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကနေ အိမ်ပြန်သယ်ရောက်ရှိနေပြီး မနက်ဖြန် ရွာကသုသာန်မှာ သင်္ဂြိုဟ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:08 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:21 PM No comments:
(အိန္ဒိယမိန်းကလေးငယ် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ဆေးရုံ)
အိန္ဒိယတွင် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရသူ အမျိုးသမီးငယ်သည် ယခုအခါ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူရန် စင်္ကာပူ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ နယူးဒေလီတွင် မောင်းနှင်နေသော ဘတ်စ်ကား တစ်စင်းပေါ်၌ အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရသော ဆေးကျောင်းသူမှာ စင်္ကာပူရှိ မောင့်အဲလိဇဘက် ဆေးရုံတွင် ကုသမှု ခံယူနေကြောင်း ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အတည်ပြုခဲ့သည်။
"သူ့အခြေအနေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိုးရိမ်စရာ ရှိနေသလို အလေးအနက် ကြပ်မတ်ကုသမှုမျိုး ခံယူရမှာပါ"ဟု ဆေးရုံ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိက ဆိုသည်။ မိန်းကလေးသည် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရသည့်အပြင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်နှက် ညှင်းပန်းမှုများကိုပါ ခံစားခဲ့ရကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယတွင် မုဒိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရမ်းကားမှုများပါ ဆင့်ကဲ ပေါ်ပေါက်လာသည့်နောက် ရဲများနှင့် ဆန္ဒပြသူများ ပြဿနာ တက်ခဲ့ရသေးသည်။ ဆေးရုံ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိက "အသေးစိတ် အခြေအနေတွေကိုတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါက လူနာနဲ့ မိသားစုရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အခြေအနေကို လေးစားမှု ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ"ဟုလည်း ဆိုသည်။ မိန်းကလေးသည် မိဘများ၊ အိန္ဒိယ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ယာတင်ဂက်ပ်တာ ဦးဆောင်သော ပညာရှင်အဖွဲ့နှင့်အတူ စင်္ကာပူသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။
အသက်(၂၃)နှစ်ရှိ မိန်းကလေးသည် တနင်္ဂနွေနေ့က ဒေလီမြို့ တောင်ပိုင်းတွင် မောင်းနှင်လာသော ဘတ်စ်ကား တစ်စင်းပေါ်၌ အရက်မူးနေသူ (၆)ဦး၏ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကာ မုဒိမ်းကျင့်မှုနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ သူမသည် ဝမ်းဗိုက်နှင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ အနေအထားတွင်ပါ အခြေအနေ မတည်ငြိမ်သေးကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:18 PM No comments:
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
၂၀၁၂- ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်
၁။ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးညီလာခံကို ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၆)
ရက် နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့အထိ KNU နယ်မြေ၊ ဘားအံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၇)ဒေသတွင် ကျင်းပပြီး
ဤညီလာခံတွင် ကိုယ်စားလှယ်(၁၇၁)ဦး၊ လေ့လာသူ(၇၄)ဦး စုစုပေါင်း(၂၄၅)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ
၂။ ဤညီလာခံသည် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ (၄)နှစ်တာကာလလုပ်ငန်းအစီရင်ခံ
စာနှင့် နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များ ပြန်လည်စီစစ်သုံးသပ်အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ညီလာခံမှနိုင်ငံရေးနှင့်အမျိုးသားရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုပိုမိုအားကောင်း
လာရေးကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန်၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးစ
သည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
ပြုနိုင်ရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးကော် မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းသွားရန် သဘောထားချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
၄။ ညီလာခံသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသစ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါ
၁။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး (ဥက္ကဌ)
၂. ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန် (ဒု-ဥက္ကဌ)
၃. ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း (အတွင်းရေးမှူးချုပ်)
၄. ပဒိုစောသောသီဘွဲ (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး - ၁)
၅. ပဒိုမန်းမန်း (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး - ၂)
၆. ပဒိုစောရောဂျာခင် (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
၇. ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
၈. ပဒိုစောသမိန်ထွန်း (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
၉. ပဒိုစောတာဒိုမူး (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်) ၁၀. ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်နီ (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
၁၁. ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဘောကျော်ဟဲ (ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်)
၅။ ညီလာခံမှ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်နီအား ကေအဲန်အယ်လ်အေ-ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မ
တော်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဘောကျော်ဟဲအား ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်
၆။ မြန်မာအစိုးရ၏ လက်ရှိအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍
ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအဆင့်သို့ရောက်စေရန် လေးလေးနက်နက်အမြန်ဆုံးအကောင်
အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်
ရေးအတွက် တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာအပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေးကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်
ဟု ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ သုံးသပ်သည်။
၇။ ယခုလို မြန်မာအစိုးရမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်၍ မြန်မာအာဏာပိုင်များမှ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို အကြမ်း
ဖက် နှိမ်နင်းမှုရှိနေသေးသဖြင့် ၎င်းအပေါ်လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
သို့သော် မြန်မာအစိုးရမှ ၎င်းဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့
စည်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ကြိုဆိုပါသည်။
၈။ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြ
ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးကို လက်ရှိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ စစ်မှန်သော
ဖယ်ဒ ရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အား
စုများနှင့်အတူ လက်တွဲညီစွာ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါ
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဗဟိုဌာနချုပ် ဆက်သွယ်ရန်
၁။ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း (+၆၆) ၈၁၈-၀၇၆၂၇-၉
၂။ ပဒိုမန်းမန်း (+၆၆) ၈၇၉ ၄၃၈ ၇၅-၀
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:48 AM No comments:
December 25 | Author: Nan Paw Gay (KIC) | Posted in Articles, Recommended | Tags: Karen, KNU
The Karen National Union 15th Congress finished with the election of all the organization’s positions voted-in for the next four years administration.
Following the election of its five top leaders, together with its Central Standing Committee, the KNU elected General Saw Jonny, the former commander of the Karen National Liberation Army 7th Brigade, as its Army Chief. General Saw Baw Kyaw Heh, the former 5th Brigade Commander was elected as vice-chief-of staff (VCS) yesterday, December 24.
The KNU has filled its eleven Central Executive Committee members with the addition of another six leaders to its top five positions. The six addional leaders are – General Saw Jonny, General Saw Baw Kyaw Heh, Padoh Roger Khin, Padoh Saw Thamein Tun, Padoh Mahn Nyein Maung and Padoh Ta Doh Moo.
The Karen National Union head of departments for the next four-year-term will be.
Padoh Mahn Ba Tun – Forestry Department
Padoh Kawkasar Saw Nay Soe – Transportation Department
Padoh Saw Eh K’lu Shwe Oo – Health and Welfare Department
Padoh Saw Hla Tun – Organizing and Information Department
Padoh Saw Lah Say – Education and Cultural Departnment
Padoh Saw Mya Maung – Breeding and Watery Department
Padoh Saw Roger Khin – Defense Department
Padoh Saw Kae Le – Mining Department
Padoh Saw Eh K’lu Say – Justice Department
Padoh Saw David Thakabaw – Alliance Affair Department
Padoh Saw Aung Win Shwe – Foreign Affair Department
Padoh Saw Ah Toe – Interior and Religion Department
Padoh Saw Khay Hsur – Finance Department and
Padoh Saw Dot Lay Mu – Agriculture department
All the elected and appointed positions will again be submitted to the Congress on Wednesday, December 26 for ratification. Following the confirmation of the newly elected KNU leaders there will be swearing-in ceremony that will signal that Congress is closed.
The 15th KNU Congress began on November 26 at Lay Wah, Pa-an District, Karen State. The first secret ballot voting at this Congress began with the election of the 45 Central Standing Committee members. On December 21, from the 45 Standing Committee members, the KNU elected the top five positions – General Mutu Say Poe as chairperson, Naw Zipporah Sein as vice-chairperson, Padoh Saw Kwe Htoo Win as general secretary, Padoh Saw Thaw Thi Bwe as joint secretary 1 and Padoh Mahn Mahn as secretary 2.
Padoh Saw Ah Toe was voted-in as the KNU Chief Judge, but followingadisagreement, the position was finally given to Padoh Saw Dot Lay Mu, who had received the second most votes.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:15 AM No comments:
KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်
ဖနိဒါ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၃ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး
ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်း အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမည်ဟု တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ပဒိုမန်းမန်း က ပြောသည်။
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယခင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး လာမည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သစ်ကို ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်က KNU ရဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲတော့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်က အရင်အတိုင်းပဲ ချမှတ်ထားတဲ့ အခြေခံ ၄ ဆင့် ပမာဏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး ခိုင်မာတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ဆက်သွားမယ်” ဟု ပဒိုမန်းမန်း က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ယခင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုဒေးဗစ် တာကပေါ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်၊ စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး၊ တရားရေးဌာနမှူး ပဒိုဒေးဗစ်ထော၊ ကျန်းမာရေးဌာမှ ဗိုလ်မှူးစောရောဂျာခင်နှင့် သစ်တော်ဌာနမှူး ပဒိုစောအားတိုး၊ ဘားအံခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုအောင်မော်အေးတို့ကို တို့ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ထိ ဘားအံခရိုင် တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော KNU ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံမှ ဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ် (ယခင် စစ်ဦးစီးချုပ်) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး ကို တင်မြှောက်လိုက်ပြီး စစ်ဦးစီးချုပ်သစ်အဖြစ် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောဂျော်နီအား ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောဘောကျော်ဟဲ အား တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။
ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ နော်စီဖိုးရာစိန်၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ပဒိုသောသီဘွဲ၊ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်၊ ပဒိုစောသမိန်ထွန်း၊ ပဒိုစောတာဒိုမှူး၊ ပဒိုရောဂျာခင်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်နီနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောဘောကျော်ဟဲ တို့ ၁၁ ဦးအား တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ထိုသို့ ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်းအလဲများ လုပ်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများမှာ မူလအတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပဒိုမန်းမန်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသားရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု ပိုမို အားကောင်းလာရေးကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန် အမျိုးသမီး ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်ဟု ပဒိုမန်းမန်း က ပြောသည်။
“အမျိုးသမီးတွေ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာ ဖို့၊ အားကောင်းလာဖို့၊ ဗဟိုကော်မတီအဆင့်မှာ အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်
နိုင်ခဲ့တယ်။ အကောင်အထည်ဖော်တာက အချိန်အများကြီး လိုပါသေးတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ လက်ရှိတွင်မူ ဗဟိုကော်မတီ ၄၅ ဦးတွင် အမျိုးသမီး လေးဦးသာ ထားရှိနိုင်သေးသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်းက နှစ်ဖက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က နှစ်ဖက်တပ်များ လိုက်နာသင့်သော ကျင့်ဝတ်များအပေါ် သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် KNU ၏ တပ်မဟာ ၁ မှ ၇ ထိ တပ်နေရာ ချထားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြခဲ့သည်။
ညီလာခံတွင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းသွားရန်နှင့် အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေး တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ကိုလည်း ချမှတ်သွားရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
KNU ၏ ဌာန ၁၄ ခုမှ တာဝန်ခံများကိုလည်း ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ရာ ပဒိုမန်းဘထွန်း (သစ်တောဌာန)၊ ပဒိုစောနေစိုး (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန)၊ စောအယ်လိုဆွေဦး (ကျန်းမာရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန)၊ စောလှထွန်း (စည်းရုံးရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန)၊ စောလေမူး (လယ်ယာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဌာန)၊ စောလှစေး (ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာန)၊ စောမြမောင် (မွေးမြူရေးနှင့် ငါးဖမ်းဌာန)၊ စောရောဂျော်ခင် (ကာကွယ်ရေးဌာန)၊ စောကဲလဲ (သတ္တုတွင်းဌာန)၊ စောကလိုစေး (တရားရေးဌာန)တို့ ဖြစ်သည်။
ယခင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့သော စောဒေးဗစ်သာကဘောမှာ (မဟာမိတ်ရေးရာဌာန)၊ စောအောင်ဝင်းရွှေ (နိုင်ငံခြားရေးဌာန)၊ စောအာတိုး (တရားရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန)၊ စောခေးဆယ် (အကောက်ခွန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဌာန)တို့ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကွယ်လွန်သူ ပဒိုဒေးဗစ်ထော၏ တရားရေးဌာန တာဝန်ခံ နေရာတွင် ပဒိုအယ်ကလိုစေးအား တာဝန်ပေးလိုက်ပြီး ပဒိုစောလှငွေအား အရေးကြီးသည့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တနေရာတွင် တာဝန်ပေးအပ်မည်ဟု သိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:01 AM No comments:
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂျော်နီကို ကေအဲန်အယ်လ်အေ စစ်ဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်
ကရင်လူထုထင်မှတ်ထားသည့်အတိုင်စ်ဦးစီးချုပ်ရလဒ်က ဒီလိုပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ နည်းနည်းမှ
မလွဲပါဘူး။ ထူးခြားတာက လူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေး
ချယ်ခဲ့တယ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဘာကြောင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘောကျော်ဟဲနဲ့ တခြားတပ်မဟာမှူးတွေကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ရသလဲဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။
တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ပဒိုစောအားတိုး အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ အတည်မပြုပဲ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တာဟာလည်း
ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် လူပြိန်းတွေပဲ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ မတရားမှု သမိုင်းအမည်းစက်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်မူးတူးစေးဖိုးကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပေး
နိုင်မယ်လို့ လက်တဆုပ်စာလူနည်းစုတချို့က ယုံကြည်နေဆဲပဲဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။)
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းဖော့ဂေ (ကေအိုင်စီ)
မပြီးဆုံးသေးသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၏ ကွန်ဂရက်(ညီလာခံ)တွင် တပ်မဟာ(၇)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂျော်နီကို
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့(KNLA) စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ယနေ့ ရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
၎င်းစစ်ဦးစီးချုပ်အပြင် ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် တပ်မဟာ(၅)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘောကျော်ဟဲကိုပါ KNU ဗဟိုထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်
၅ဦး နှင့် တပ်မဟာမှူး ၇ဦးတို့က တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကာ ကွန်ဂရက်ခမ်းမဆောင်၌
ယနေ့ ဆက်လက် ပြုလုပ်သည့် ကွန်ဂရက် အစည်းအဝေးတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်
ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ငါးဦး နှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်များက ကျန်ရှိနေသေးသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များကို
ဆက်လက် ရွေးချယ်ရာ စစ်ဦးစီးချုပ်၊ ဒုစစ်ဦး စီးချုပ်၊ ပဒိုစောရောဂျာခင်၊ ပဒိုစောသမိန်ထွန်း၊ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့်
ပဒိုတာဒို့မူးတို့အား အတည်ပြု သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ထို့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများကိုလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ရာ
ပဒိုမန်းဘထွန်း - သစ်တောဌာန
ပဒိုကော်ကဆာစောနေစိုး - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန
ပဒိုစောအဲ့ကလူရွှေဦး - ကျန်းမာရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန
ပဒိုစောလှထွန်း - စည်းရုံးရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
ပဒိုစောလားစေး - ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာန
ပဒိုစောမြမောင်` - မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဌာန
ပဒိုစောရောဂျာခင် - ကာကွယ်ရေးဌာန
ပဒိုစောကဲလဲ - သတ္တုနှင့် မိုင်းဌာန
ပဒိုစောအဲ့ကလူစေး - တရားရေးဌာန
ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘော - မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဌာန
ပဒိုစောအောင်ဝင်းရွှေ - နိုင်ငံခြားရေးဌာန
ပဒိုစောအားတိုး - ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန
ပဒိုစောဟေးစယ် - ဘဏ္ဍာရေးဌာန တို့ဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် ယနေ့ အစည်းအဝေးသို့ မတက်ရောက်သူများရှိသလို လက်ရှိ ရွေးချယ်လိုက်သည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့်
တာဝန်ခံများ ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့တွင် အခြားညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့်
ထပ်မံ အတည် ပြုကာ ခေါင်းဆောင်များမှ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို၍ ကွန်ဂရက်ကို အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့က စတင် ကျင်းပခဲ့သည့် KNU ကွန်ဂရက်မှာ ရက်သတ္တ လေးပတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာလ
၂၀ ရက်နေ့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲကို စတင်ခဲ့ပြီး ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင် ၄၅ဦးကို
လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် နှစ်ဆင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြ သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့တွင် ခရိုင်ဥက္ကဌနှင့် တပ်မဟာမှူးအားလုံး ပါဝင်သည့် ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီများထဲမှ KNU
ဥက္ကဌအ ဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုး၊ ဒုဥက္ကဌအဖြစ် ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၁)အဖြစ် ပဒိုစောသောသီဘွဲနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂)အဖြစ်
ပဒိုမန်းမန်းမန်းတို့အား လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့်ပင် ရွေးကောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ကွန်ဂရက်ကိုယ်စားလှယ်များက တရားသူကြီးချုပ်ကို လျှို့ဝှက်မဲအများဆုံးရရှိသူ
ပဒိုစောအားတိုးအား ရွေး ကောက်ခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်သူမှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည့်အတွက် ဒုတိယ မဲအများဆုံးရရှိသူ
ပဒိုစောဒေါ့လေးမူအား တရားသူကြီး ချုပ်အဖြစ် ယနေ့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:16 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:50 AM No comments: